Okubalulekile I-Saratov Airlines iphahlazeka
unyaka 1 11 edlule #992 by Dariussssss
I-Saratov Airlines indiza ye-703, i-Antonov An-148, yabhujiswa ngemuva kwesimo esithinta indawo esiseduze neShatoanovskoye, eRussia. Bonke abagibeli be-65 kanye namalungu e-6 abasebenzi babulawa.
Indiza yaphuma emgwaqeni i-14R e-Domodedovo Airport eMoscow ku-14: amahora angu-21 isikhathi sendawo (11: 21 UTC). Isimo sezulu mayelana nesikhathi sokuhamba e-Domodedovo Airport sasihlanganisa ukubonakala okulinganiselwe (2100m) ngesikhathi seqhwa elikhanyayo. Ukushisa kwakuyi-5 ° C, i-overcast yamafu e-2600 ezinyaweni ze-AGL.
I-Interstate Aviation Committee yathi, ngaphambi kokuhamba, ukushisa kwama-tubot amathathu amathobhu ayengakavulwa.
Ngemva kokuhamba, endaweni ephakeme ye-130-150 m (425-490 ft) ngaphezu kwezinga lomhlaba, ukuzenzekelayo kwe-autopilot kwashintshwa. Ama-flaps aphakanyiswe njengoba indiza ikhuphuke endaweni ephakeme ye-550 m (1800 izinyawo).
Mayelana nemizuzu engu-2 imizuzwana engu-30 ngemva kokungena, endaweni ephakeme ngamamitha angu-1300 (ama-4265 amamitha) kanye nesivinini sensimbi ye-465-470 km / h, kunokungafani phakathi kokufundwa kwejubane lomoya ohlangothini lomphathi wamaphesenti uma kuqhathaniswa nesikhombisi se-airspeed standby . I-airspeed side of the copilot sika ayiziwa njengoba le parameter ayingabhaliswanga yi-recorder yedatha yemoto. Kwakungekho umehluko ophawulekayo ezinkomba zokuphakama. Ngemuva kweminye imizuzwana engu-25, ukungafani kufinyelelwe mayelana ne-30 km / h ngejubane ohlangothini lwabaphathi bamakhulu.
Ngemuva kwemizuzwana ye-50, endaweni ephakeme ngamamitha angu-2000 (i-6560 ft), i-airspeed on the indicator airspeed indicator yayiphezulu futhi yaqhubeka yanda ngenkathi umoya ophezu kwezinduna ze-ASI uqhubeka ukwehla.
Abasebenzi bezindiza base beqhaqhaza ukuzenzekelayo. I-airspeed side of the captain's continued to decrease, kanti i-ASI yokulinda ibonisa i-540-560 km / h. Mayelana namasekhondi angu-50 ngemuva kokuthi i-autopilot ivaliwe, indiza yadlula ukuphakama kwe-1700-1900 m (5580-6230 ft) ngemithwalo eqondile esuka ku-1.5 kuya ku-0.5 g. Ngemva kwalokho indiza yangena emgodini ophansi ne-ASI ohlangothini lomqhubi okhombisa i-0 km / h, futhi i-ASI yokuma ebonisa i-200 km / h. I-angle yokugoba yehlelwe ku--30 / -XXUMUM degrees ene-factor factor load ye-35 g.
Indiza yathinta insimu eqhwa nge-14: 27: 05 futhi yahlakazeka. Ngaphambi kokushayisana nomhlabathi, i-ASI yokuma ikhuphukele ku-800 km / h nge-ASI yesikhulu esisaqhubeka ne-0 km / h.